Shiinaha 55L Kaam Dameerida Boorsada Molle Rucksack Warshad soosaarayaasha safarka biyaha aan dhoobneyn | Sicilis
55L Kaambayn Kaambayn Baaskiil Molle Rucksack Daypack Biyo La'aan Socdaal
Shandaddan boorsada badan ayaa si dabacsan loogu tixgelin karaa inay tahay boorsada 45L iyo 55L.
Hal boorso oo lakala saari karo oo hore loogu isticmaali karo baakad fan ah oo gooni ah, laba dhinac oo ah dhinacyada boorsooyinka lakala bixin karo oo loo adeegsan karo boorsooyinka gargaarka degdega ah.
Suunka garbaha waxaa loogu talagalay hagaajinta kore ee korka si loogu hagaajiyo cidhiidhiga suunka garabka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga.
• Xiritaanka jiinyeer
• Xiritaanka Oxford Sibetarka Naqshadeynta Naqshadeynta: tirada rucksack-ka ciidanka qiyaastii waa qiyaastii 19.6 "* 7.9" * 11.8 ", wuxuu ka kooban yahay 1x 45L rucksack oo leh 2 qaybood oo waaweyn, 1 x 7L baakad fannaaniin ah, 2 x 2L qalabka boorsooyinka. 55L rucksack wuxuu ka sameysan yahay Waxyaabaha 600D oxford, biyuhu, xirtaan iska caabin iyo xoqida xoqida, miisaanka qiyaastii 3.3lbs.
• Boorsada taatikada banaanka lagu qaato: Baakada socodku waxay leedahay nidaam, waxaad ku lifaaqi kartaa boorsooyin dheeri ah ama qalab on webbing, ballaariso awoodda dibedda ee boorsada, sida 3 maalin boorsadaada ama boorsada molle. boorsada diyaaradda, boorsada mootada, boorsada kala duwan, boorsada ugaarsiga.
• Ujeedo Badan U adeegsiga: Baakada boorsada waxay isticmaali kartaa baakad isku dhafan, xirmo gadaal badbaadin, boorso ciidan, boorsada lugeynta ee kaamamka dibedda, 3 maalin xirmo weerar ah, boorsada moolle dagaal.
• Qaab-dhismeedka waara: Boorsada ragga oo labalaab leh, jiinyeerro culus oo culus iyo fiilooyin u eg qaabka adeegga. Waxaan horeyba u xoojinay xarig garabka garabka iyo sterss-ka kale waxay miiqeen dariiqa xoojinta guntinta gudaha si loo wanaajiyo waara. Waxaa loogu talagalay 3 maalmood oo safar ah isla markaana ballaaran oo ku filan inuu qaado dhammaan qalabkaaga.
• Naqshadaynta Raaxada Raaxada: 3 shandad boorso loogu talagalay oo lagu hagaajin karo mesh mesh suunka garabka si loo yareeyo cadaadiska garabka, garabka garabka waxaa loogu talagalay isugeynta sare ee hagaajinta si loo hagaajiyo cidhiidhiga garabka garabka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, suunka suunka dhejisku wuu qaybin karaa culeyska.
★ Boorsadaan boorsada badan leh waxaa si dabacsan loogu qaadan karaa inay tahay boorsada 45L iyo 55L.
★ Hal boorso oo horay lookala qaadi karo oo si gooni ah loogu isticmaali karo baakad fannaaniin ah, laba dhinac oo boorsooyinka qalabka wax lagu qaato lagu kala qaado ah oo loo isticmaali karo boorsooyinka gargaarka degdegga ah
★ Suunka garbaha waxaa loogu talagalay korka sare ee hagaajinta si loo hagaajiyo cidhiidhiga suunka garbaha iyadoo loo eegayo baahiyahaaga.
★ Labada kiish ee ugu waaweyn ee ku jira bacda dhexda waxay ku leeyihiin qaybo mesh ama jeebab yaryar oo kala duwan si ay uga caawiso kala soocida alaabada kala duwan.
★ Qeybta weyn ee aagga boorsada lagu raaco waxay leeyihiin qashin laptop ah.
★ Mesh hawo gashan oo makiinad suuf ah, neefsasho iyo raaxo leh.
★ Bacda boorsada waxay ka samaysan tahay dhar cufan leh - waaraya oo aan biyaha u adkeysan karin.
★ Nidaamka riixista culeyska dhinac iyo hore si loo kordhiyo isticmaalka booska.
★ Jiinyeerro laba-tolmo leh oo culus ayaa ka dhigaya boorsada mid sii waara.
★ Boorsada waxaa loo isticmaali karaa 3 maalin xirmo, boorso kala duwan, boorsada ugaarsiga, boorsada badbaadada, boorsada Rucksack, boorsada, boorsada bugta ama xirmada maalinlaha ah ee isticmaalka maalinlaha ah.
Hore: Raga Boorsooyinka Awoodda Milatari ee Taatikada Xeeladaysan Fidinta Boorsada 45L
Xiga: Taambuugga teendhada PET Teendhada Tubbada Degdegga ah
Laabta Laabta Taatikada
Bacda Xeelad Xeeladeed
Ka Badbaada Dabka Ka Fudud Gurmadka Bushcraft Flint ...
Camping Kit Cook Mess Mess with Pot Pan Kettle B ...
MOLLE Kiishka Caafimaadka EMT Gargaarka Koowaad ee Rip-Awa ...
Taambuugga teendhada 2/4 Qof teendhada Qoyska Laba Laye ...
Ahama Steel Camping Cookware dhigay la Wood ...
Heeganka Qaab-dhismeedka Dabka Bilowga ah ee Hexagon ...
Bilowga Dabka Bilowga, Qalabka Badbaadinta Degdegga ah, Teendhada dusha sare ee Xtm, Teendhada Dibadda ee Joogtada ah, Taambuugga la buufin karo, Bilowga Dabka Magnesium,